बोलीदिने कोही आउँछ की ? « Ghamchhaya
बोलीदिने कोही आउँछ की ?
Published On : 10 January, 2020 2:15 pm
बाबू जाडो बढेको छ । म जस्ता बुढिहरू जाडोले धेरै पिरोलिएको छन् ।
हिउँदै झरीले एक्कासी ह्वात्तै बढाएको जाडोमा वृद्धाश्रमका जेष्ठ नागरिकहरुको हाल खबर बुझन मातातिर्थस्थित वृद्धाश्रममा पुग्दा एक जना वृद्धा यसो भन्दै रुँदै हुनुहुन्थ्यो । जिर्ण शरीर र अनेकौंको रोगको पीडा । त्यसमाथि बढेको जाडोले कष्ट मात्रै ल्याउँदैन जन्म घर ताप्लेजुङ देखि मातातिर्थस्थित वृद्धाश्रमसम्म आइपुग्दाको सम्झना र आँसु पनि ल्याउँछ ।
घामछायाँ सवाददाताको गाला सुम्सुम्याउदै भन्नुहुन्छ १५ बर्षको उमेर बिवाहा गरिदिए आमाबाबाले त्यसपछि अनेकौं हण्डर र ठक्कर खाएर सन्तानबाट विछोडिनु पर्यो । त्यसपछि त्यहाँ आएकै २२ बर्ष भयो घरमा जवान छोराछोरीहरू थिए तर अहिले एउटै कुरा मात्र बाँकी छ, के गर्नु अभागि भएसी यस्तै रहेछ भन्दै रूनुभयो ।
नेपालमा बृद्धाश्रमहरु बनेका छन् तर तिनलाई आश्रममा बस्ने बाध्यता नपर्ने अवस्था सृजना गर्नेतर्फ कुनै नीति बनेको छैन । सरकारले अन्य सामाजिक कल्याणको कार्यक्रमका लागि छुट्टयाएको भए बृद्धबृद्धाको को हितमा केन्द्रित भएको पाइदैन । यसको परिणाम स्वरुप नेपालका धेरै ठाउँका वृद्धाश्रम गहभरी आँसु लिएर विरहको गीत सुनाउने आमा र बाबुहरू धेरै छन्
आफूले बुताले भ्याएसम्मको दुःख गरेर हुर्काएका सन्तानहरु कहाँ पुगे कुन्नी अहिले बुढेस कालको लौरो सन्तान होइन सामाजिक संस्थाहरु बन्न पुगेका छन् । आफूले जन्माएका छोराछोरी पालन पोषण गर्नु हुर्काउनु, पढाउनु र इच्छाहरु हरसम्भव पूरा गरिदिनु बाबुआमाको अनिवार्य कर्तव्य हो । समाज र परम्पराले जोडतोडका साथ भन्छ । तर,
आफूलाई जन्माउने बाबुआमालाई हेरचाह गर्नुे पर्ने कि नपर्ने ? विधि र परम्पराले त्यति कडाईका साथ बाध्य पार्दैन र धेरै सन्तानका लागि यो इन्छाधिन विषय बन्छ । यसैको परिणाम हो, हिउँदे झरीले पानी सँगै बृद्धाश्रम आश्रित्को आखाँबाट पीडाको आसुँ पनि वर्षाउँछ ।
कतिले यही जाडकै कारण कतिले ज्यानै पनि गुमाईरहेका छन् ।
आफ्नो छोराछोरी र परिवारको चट्टारो, दुःख सहि कति त आफ्नै छोराछोरी बाट पनि तिरस्कृत भएर आश्रम आउने गरेका हुन्छन । कति आश्रम आउछन् भनी कति त रोडमै आफ्नो बुढेसकालको अन्तिम सास फेरिरहेको हुन्छन् । मुटुभरी आफ्नो पीडा भरेर बाच्न बाध्य भएका छन् ।
मान्छेहरुका बिच, एक्ला-एक्लै
परोपकारी सँस्कृति र सभ्यताभएको देशमा सन्तान नभए र मात्र होइन सन्तानले वास्ता नगरेर वा भावना नबुझेरै पनि वृद्धाश्रममा बस्ने मानिसहरु आउँछन् भन्ने अवस्था आफैमा एउटा बिडम्बना हो । यसबारे राज्य, समाज र समाजको जल्दो बल्दो पुस्ताले गम्भिरता पुर्वक सोचेको पाइँदैन। युवा युवतीहरु आफ्ना पाखुराको बलले धरै थोक गर्न खोजिरहेको बेला । पाखुरा बसेका हरुले न्यूनतम् जीवन बाँच्न पनि कठिन छ । जुन सन्तानको उज्वल भविष्यको कामना गर्छन् त्यही सन्तानबाट अलग्गिएर एक्लो जीवन जीवन बाध्य भएको छन् । सन्तानको माया पाउने बेला सन्तानले नै माया मारेको अवस्था छ कतिको ।
कस्तो छ देशमा बृद्धको अवस्था रु
कुनै बेलाका सुन्दर मुहार चाउरिएर मुजा परेको छ । गज्जबसँग मकै भटमास चपाउने दाँतहरू मकै छाडाइएको खोयाकै अवस्था बनाएर झरेका छन् । यस्तो दिन नआउने कोही पनि हुँदैन तर ति मध्ये पनि कोहीलाई छोराछोरी र नाती नातिनाका साथ रमाइलो छ त कोहि घरबाट सडक र सडकबाट आश्रममा पिरोलिएर बाँच्नुको विकल्प छैन् ।
नेपालमा ३० प्रतिशत वयोवृद्ध उमेरका नागरिक जस मध्ये ४५ प्रतिशत सन्तानका साथमा रमाईरहेका छन् भने आश्रममा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । कतिपय वृद्धवृद्धाहरु चिसोको कारणबाट सडकमा र आश्रममा गम्भिर स्वास्थ्य अवस्थामा समेत छन् ।
आश्रममा आश्रित् मध्ये धेरै वृद्धवृद्धाहरु आफ्नो सन्तान नाम लिने बितिकै रुन्छन् । कतिले भने सन्तानको नाम लिने वित्तिकै संयम गुमाउँछन् र नाम लिनेलाई नै झपार्न थाल्छन् ।
बोली दिने कोही आउँछ की ?
हरेक अभिभावकको एउटा सपना हुन्छ , अनि चाहना सन्तानले प्रगति गरि आफ्नो भविष्यको सहारा बनोस भन्ने , सन्तानले खुसी साथ आमाबाबाको सेवा गरि उनिहरूलाई खुसी देओस् । त्यस्तो सपना पूरा हुनुको साटो आफैं आश्रममा बसेका वृद्धवृद्धाहरुलाई कोही युवावयको व्यक्ति आएर बोलिदिँदा मात्र पनि आफ्नै सन्तान भेटे जस्तै गरी खुसी हुन्छन् । त्यसैले आश्रम् बाहिरका सडकमा सँधै उनीहरुको नजर हुन्छ, बोली दिने कोही आउँछ की ?
रुकुम हत्याको विरोधमा रक्तदान !!
कोरोनाको महामारीको बेला रुकुममा जातीय प्रेमको निहुमा सामुहिक हत्याको बिरोध गर्दै दलित सामुदयाका प्रथम सगरमाथा
कफीका कपहरुमा उठेको तेस्रो तरंग
कफी सपमा बसेर कफी खाँदै हुनुहुन्छ । एक पटक सुरुप्प पार्दा झन्डै चियाको बास्नासहितको मधुर